क्यानाडा राजस्व एजेन्सीको साथ प्रत्यक्ष जम्मा व्यवस्थित गर्नुहोस्
क्यानाडा सरकार सरकारी भुक्तानीको लागी पेपर चेकको प्रयोगलाई रोक्न धक्का दिएको छ। जो अझै प्रत्यक्ष सीधा जमात मा नामांकन नहीं गरेर सकते हो अझै पनि पेपर चेक प्राप्त गर्न सक्छन्, तर सरकार को धेरै मान्छे लाई संभव छ को रूप मा इलेक्ट्रनिक विकल्प को लागी स्थानांतरित गर्न को लागी छ। यो एक वैकल्पिक हो (तर दृढ सिफारिस गरिएको) हरेक को लागि कुनै पनि प्रकारको सरकारी जाँच प्राप्त गर्न को लागी।
क्यानाडा सरकारले 2012 मा सुरुवात प्रत्यक्ष डिप्लोय विकल्पमा रूपान्तरित गर्न आफ्नो अभियान सुरु गर्यो।
यो अनुमान लगाइएको थियो कि चेक उत्पादनको लागत लगभग 80 सेन्ट थियो जबकि सीधा जमा भुक्तानी क्यानाडा सरकारको 10 किलसम्म खर्च गर्दछ। सरकारी अधिकारीहरूले उनीहरूलाई सीधा जम्मामा रूपान्तरणको साथ वार्षिक $ 17 मिलियन बचत गर्न अपेक्षा गरेको छ, र यो "greener" विकल्प हुनेछ।
सरकारी जाँचहरू अझै क्यानाडामा मेल पठाइएका छन् जुन दूरस्थ क्षेत्रमा बाँचिरहेका व्यक्तिहरू जहाँ बैंकिङमा सानो वा कुनै पहुँच छैन। बाँकी रहेका 300 मिलियन सरकारी भुक्तानीहरू बैंक प्रत्यक्ष डिपो मार्फत डेलिभर गरिँदै छन्। पेरोल प्रत्यक्ष जम्माको साथ जस्तै, क्यानाडा कार्यक्रमबाट रकमहरू तुरुन्तै उपलब्ध गराउन उपलब्ध छन्, प्राप्तकर्ताको सट्टा मेलमा पुग्नको लागि प्रतीक्षाको सट्टा।
क्यानाडा राजस्व एजेन्सी (सीआरए) विभिन्न किसिमका विभिन्न कार्यक्रमहरूको लागि भुक्तानी ह्यान्डल गर्छ, र सबै प्रत्यक्ष डिपो भुक्तानीको लागि योग्य छन्। सूचीमा समावेश छ:
क्यानाडा आयकर फिर्ती
GST / HST क्रेडिट र कुनै सम्बन्धित प्राधिकरण भुक्तानीहरू
कार्यकारी आय कर लाभ (WITB) अग्रिम भुक्तानीहरू
क्यानाडा बाल कर लाभ (सीसीटीबी) भुक्तानी र सम्बन्धित प्राधिकरण भुक्तानीहरू
विश्वव्यापी बाल हेरविचार लाभ (UCCB) भुक्तानीहरू
व्यक्तिगत जानकारीमा परिवर्तन गर्नुहोस्
त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् क्यानाडाहरूले यी भुक्तानीहरूको सीधा जम्मा गर्न अनुरोध गर्न सक्छन् वा आवश्यक पर्ने सीआरए आफ्नो बैंक वा मेलिङ जानकारी परिवर्तन गर्न सक्छन्।
तपाईं मेरो खाता कर सेवा अनलाइन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा मेल गरेर आफ्नो आयकर रिटर्न पठाउन सक्नुहुन्छ। क्यानडियन्सहरू कुनै पनि समयमा प्रत्यक्ष डिप्लोमा नामांकन फारम पूरा गर्न सक्छन्, र मेल मार्फत पठाउनुहोस्।
यदि तपाइँ फोन द्वारा आफ्नो जानकारी अपडेट गर्न चाहानुहुन्छ भने, 1-800-99-8281 लाई कल गर्नुहोस्। तपाईं सीधा जम्मा जानकारी, सेवा सुरु गर्न वा रद्द गर्न मद्दत, तपाईंको बैंकिंग जानकारी परिवर्तन गर्न वा अवस्थित प्रत्यक्ष जम्मा खातामा अन्य भुक्तानीहरू थप्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
ठेगाना वा तपाईंको भुक्तानीमा परिवर्तन बारे चाँडो सीआरए को सूचित गर्नुहोस्, या तो सीधा जम्मा वा मेल गरेर, अवरोध हुन सक्छ। यदि तपाईंले आफ्नो बैंक खाता परिवर्तन गर्नुभयो भने तपाईलाई सीआरए को चाँडै सूचित गर्नु पर्दछ। पुरानो बैंक खाता बन्द नगर्दासम्म तपाईंलाई नयाँमा भुक्तानी प्राप्त नगरेको छैन।
प्रत्यक्ष जम्मा आवश्यक छैन
जब यो पहिले प्रत्यक्ष डिपुको दिशामा धक्का सुरु भयो, त्यहाँ केही कडा भ्रम थियो कि क्या क्यानाडा सरकारको भुक्तानीको लागि यो आवश्यक थियो। तर ती व्यक्तिहरूले पेपर चेक प्राप्त गर्न मनपर्छ यो गर्न जारी राख्न सक्छन्। सरकारले पेपर चेक पूर्ण रूपमा फाँटिरहेको छैन। यदि तपाईंले कार्यक्रममा रुचि राख्नुभएन भने, सरसामान नगर्नुहोस्।
क्यूबेक प्रांतमा द्रुत तथ्यहरू
सिमन बोलिभारको जीवनी
उदाहरण खाटका वाक्यहरू
निजी विद्यालयहरूमा एक भित्र हेर्नुहोस्
मौसम र मौसम बीचको भिन्नता के हो?
गोल्फमा 'देवियस टेनिस' र किन उनीहरूलाई बोलाउनु हुँदैन भनेर
अंग्रेजीमा स्वतन्त्र क्लज के हो?
के तपाईंको शुक्रहरू प्रेममा मिल्दो छ?
Tuscany को Matilda
कैनवास संरचना समीक्षा
स्क्याटरप्लट के हो?
कसरी ठूलो अवसाद अमेरिकी विदेश नीति बदलियो
इतिहासमा 10 सर्वश्रेष्ठ वेलनियस
तत्व ब्लकहरू के हुन्?
एक जिगगृह र तिनीहरूले कसरी निर्माण गरेका छन्?
पिंग-पोंग तालिका निर्माण गर्ने - तपाईंको आफ्नै तालिका निर्माण गर्ने योजना टेनिस तालिका
फोर्ड एफ सीरीज ट्रक, 1967-1972
"विन यो गर्न को लागि मिनेट" गुब्बारे खेल: गुरुत्वाकर्षण को दोष